​Boqolaal Somaali ah oo lagu xiray Yemen
Boqolaal Qaxooti Somaali ah ayaa lagu xiray gobolka Hadramawt, ee koonfurta dalka Yemen, kuwaasi oo la sheegay inay yihiin Muhaajiriin aan diiwaan-gashnayn, islamarkaana si sharci darro ku joogay wadankaasi.
Saraakiisha Booliska Hadramawt, ayaa xaqiijiyay in dadkan laga soo qabtey gudaha gobolkaasi iyagoo kusii jeeda magaalo lagu magabaaco Brom Mayfa.
"Qaxootiga oo ay ku jiraan Haween iyo Caruur waxay ahaayeen Muhaajiriin aan haysan kaararka Qaxootinimo, waxayna ahaayeen muhaajiriin si sharci darro ah uga soo galay dalka Yemen," ayaa lagu yiri war kasoo baxay Booliska Hadramawt.
Qaxootigan ayaa markii loa qabtey kadib waxaa la geeyay Xero Qaxooti oo ay ku jiraan Muhaajiriinta Africa, oo ku taalla gobolka Shabwa, oo ay maamusho dowladda taagta daran, ee Madaxweyne Cabdul Rabu Mansuur Haadi.
Talaadadii lasoo dhaafay, Hay'adda Socdaalka Adduunka (IOM), ayaa shaacisay in 133 qaxooti Soomaali ah ay iskooda ugu laabteen dalkoodii hooyo, kadib markii ay arkeen inaysan kusii noolaan karin xaaladda colaadda ee ka taagan Yemen.
Bishii lasoo dhaafay, UNHCR waxay sheegtay in tiro muhaajiriin African ah ay galeen Yemen kuwaasi ka dhigay tirado qaxootiga dalkaasi gaare sanadkan 2017 (30,000 ) xilli wadankaasi uu ka socdo dagaallo billowday 2015.
Muhaajiriinta kasoo tahriiba Somaaliya iyo Ethiopia, ayaa ugu badan kuwa ku sugan dalka Yemen, kuwaasi oo iskuu dayay inay si sharci darro ah ku galaan dalka Sacuudiga, si ay shaqooyin uga helaan wadankaais qaniga ku ah shidaalka.
Taliyihii Ciidamada South Sudan oo geeriyooday
Caalamka 20.04.2018. 19:15
Dalkan ugu da'da yar Qaaradda Africa ayaa la dagay colaad Sokeeye oo u dhaxaysa...